hoo!haa!! – Page 45 –
Post Views: 137 Ndi Fulani na-achi ehi ka anyị na anụ ugbua na ha wakporo obodo nta dịgasị na Lawaru nakwa Dong dị n’Okpuru Ọchịchị Demsa nke Adamawa Steeti. Site n’ozi e nwetara n’aka Onyeisioche Okpuru ọchịchị Numan, ndi mwakpo a na-esu obodo nta ndi ahụ ọkụ N’abalị ole moleRead More →
Post Views: 256 NKWỌ Taa bụ Ahịa Nkwọ; Nkwọ Ogbede, Otu Nkwọ Ọnịcha, Nkwọ Nnewi, Nkwọ Owelli, w.d.g. Onye ga-agara anyị ahịa Nkwọ taa? O ruo nu n’omume. Chetakwa na uru dịkwa yaoooo! Uru Puku Naịra Atọ. N3KRead More →
Post Views: 130 NTỊ Read More →
Post Views: 184 AFỌ ỤGBỌỌKA bụ ahịa dị n’Ugbọọka nke dị n’Okpuru Ọchịchị Nkanu East n’ime Enugwu Steeti. Ihe akacha enweta n’ahịa ahụ bụ osikapa nke ndi obodo ahụ na-akọpụta nke ukwuu. Ihe ndi ọzọ na -adị nke ukwuu bụkwa ihe ndi a na-akọpụta n’ugbo dịka akpụ, ji, ede nakwaRead More →
Post Views: 185 Aka na-achị Anambara Steeti, Wili Obianọ, akọwaala Emeka Ojukwu, nta dịka onye na eyighi nna ya bụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu chaa chaa. O kwuru nkea mgbeRead More →
Ọrịa írí (Meningitis)
Post Views: 322 ỌRỊA ÍRÍ (MENINGITIS) NKE ỌHỤRỤ BATARA NAIJIRỊA. Ọrịa írí ọhụrụ nke anakpọ Cerebrospinal Meningitis (CSM), Neisseria Meningitides ụdị Ch (type C) abatama obodo anyị bụ Naijirịa nke mbụ. USORO MGBOCHỊ ỌRỊA ÍRÍ ỌHỤRỤ NKEA. (1) Izere njubiga ókè nke mmadụ. (2) Ihi ụra ebe dị ventịlet. (3)Read More →
Ọrịa Ishi anya oghe (Glaucoma)
Post Views: 303 Ụmụ Igbo ndewonu. Achọrọ m k’anyị leba anya maka ọrịa ishi anya oghe nke ndi bekee kpọrọ Glaucoma. GỊNỊ BỤ ỌRỊA ISHI ANYA OGHE? Ishi anya oghe bụ otu n’ime ọria n’ebute mmadu ikpu ishi. Ọ n’ebute ishi na-adịgide adịgide. GỊNỊ N’EBUTE ỌRỊA ISHI ANYA OGHE? IheRead More →
Post Views: 505 ỌNỤ (Mouth) Read More →
Post Views: 267 Taa bu ORIE. Anyi gara ahia ORIE NWICHEKU di na Okohia, Isiekenesi nke no n’Okpuru Ochichi Ndida Ideato (Ideato South). Ahia ahu na mgbede ubochi orie nile. Ndi na-abia ahia ahu na-esi obodo di iche iche n’ime Isiekenesi. Ihe di mkpa a na-enwetakwa n’ahia ahu bu mmanyaRead More →
Asa, i gbugo m!
Post Views: 243 Ihe a bu Luvi-Luvi ndi OMATA Bikonu, kedu ihe kara nwa agbogho a obi o ji chochaa onye o ga abu ya na ya o buru onye a dika onye Mekaniki? “Asa,i gbugo m!” Ihe a ka odogwu a na-agwa asa a no ya n’apata ukwu. “Nwanne,Read More →
Post Views: 235 USORO ESI ETE OFE ONUGBU Ofe onugbu bu nnukwu ofe e jiri mara Ndgbo, o kachasi na mpaghara AnambraSteeti. Ofe a na-ato uto nke ukwuu ma na adikwa mma na-afo maka ilu ahu nke si na onugbu. NGWA NRI E JI ESI OFE ONUGBU Onugbu, ede, ogili,Read More →
Maịk Ejeagha nke obere
Post Views: 170 Mmemme ụbọchị Omenala ndi ụlọ akwụkwọ Kings High school dị n’Emene, Enugwu mere n’abalị iri n’asaa nke ọnwa Maachị afọ a. Obere Maazị Chukwuebuka Nweze bụ onye gụrụ “OMEKA AGỤ”, egwu ochie dike n’egwu Igbo bụ Maịk Ejeagha nke ọma iji mee ọhaneze bịara ebe ahụ obiRead More →
Post Views: 158Read More →
Post Views: 256 Site n’aka Mba Udogu Shetima na Jonatan Onye bubu Onyeisiala, Gudlọk Jonatan nọrọ ụnyahụ cheere Aka na-achị Boronu Steeti bụ Kashim Shetima aka mgba ka ọ gwa ụwa eziokwu banyere etu aka ya si dị na ntọrọ atọrọ ụmụ agbọghọ Chibok . N’ozi sitere n’aka onye na-ekwuchitereRead More →
Post Views: 247 Onyeisi ndi ọrụ bekee ala anyị, Winifred Oyo-Ita, ekwuola na Mịnịstrị na ahụ maka ala anyị enwetaghị ikike n’aka ya tupu ha akpọghachi Abdulrasheed Maina, onue bubu onyeisi oche otu aka ọkụ onyeisiala hiwere maka ịghazigharị okwu banyere ụgwọ ezumike nka ( Presidential Task Force on PensionRead More →
Post Views: 149 ỌYỊ, ENYI (Friend)Read More →
Post Views: 963 OKENYE Read More →
Post Views: 246 Taa bụ Afọ, ahịa anyị ga-aga taa bụ AVỌ-EMUDO. Ahịa Avọ (Afọ) Emudo dị n’Emudo-Nenwe nke dị n’Okpuru Ọchịchị Anịnri nke Enugwu Steeti. Ihe e jiri mara ahịa Avọ-Emudo bụ anụ jaki. A na-esi Steeti dịgasị n’Ugwu Awụsa dịka Kebbi nakwa Katsịna ebute ya bụ anụmaRead More →
Post Views: 266 NNERead More →
Post Views: 155 Onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ All Progressives Grand Alliance (APGA) na nhọpụta Sineti mpaghara Anambra Central Senatorial, Ichie Viktọ Umeh, echeworo Mịnista na-ahụ maka ọrụ, Dọkịnta Kris Ngige, ka ọ gbaa alụkwaghịm n’ọrụ ya dịka mịnịsta bịa ka ha chịpụ ya na ya bụ nhọpụta. UmehRead More →